Njengoba ingane isondela unyaka owodwa, ukudla kwakhe kuyanda kakhulu etafuleni jikelele. Kusukela ngesikhathi sokusungulwa kokudla okuhambisanayo kuya ezinyangeni ezingu-9 ubudala ingane yakho isivele ijwayele izithelo, amajikijolo namanzi amazambane namazambane ahlambulukile, ama-porridges ahlukahlukene, amaqanda nesinkwa.
Ezinyangeni ezingu-7-8, ukudla komntwana kuhlanganiswa ne-meat purees ne-broths, umntwana we-cottage shizi nemikhiqizo yobisi evutshiwe.
Ezinyangeni ezingu-9 kunconywa ukuba ugcwalise imenyu yezinhlanzi ngezinhlanzi , izikhathi ezingu-1-2 ngesonto ukuyithatha inyama. I-fish for baby food is abilisiwe, ikhethwe ngokucophelela emathanjeni nasechotshoziwe. Ungakwazi ukupheka izinhlanzi zenyama. Kungcono ukuma ezinhlobonhlobo zezinhlanzi ezincane zezinhlanzi - i-cod, i-heke, i-pike perch, i-flounder, i-saumon. Njengeminye imikhiqizo, udinga ukuqala nge-½ ithisipuni, kancane kancane ulethe ivolumu yesitsha esisha ku-50-60 amagremu ngosuku. Ungalisebenzisi kabi: izinhlanzi kufanele zinikezwe ingane kaningi izikhathi ezintathu ngesonto.
Mhlawumbe ukuvela kwezinhlanzi kungukuthi umehluko omkhulu phakathi kweqoqo lemikhiqizo yengane ezinyangeni ezingu-9 kusuka kwimenyu yangaphambilini. Izinguquko eziyinhloko kule nkathi azihambisani nokuhlukahluka ngokwezinga lezitsha. "Ukudla okunomsoco" ngokuya kufakazela ubisi lwebele kanye nezingxube.
Izinketho zemenyu eseduze yengane ezinyangeni ezingu-9 zimi kanje:
Amahora angu-6 - ubisi lwebele noma 200 ml yenhlanganisela
Amahora angu-10 - 150 ml weqanda, amaqanda ama-½, ubisi lwebele noma 50 ml yenhlanganisela
Amahora angu-14 - 20-30 ml yemhluzi yemifino, 150 ml we-puree yemifino, 35-40 g we-meat puree, ubisi lwebele noma 50 ml we-ingxube
Amahora angu-18 - ama-20-30 amagremu we-cottage shizi, 170-180 ml we-kefir noma ubisi obisi omuncu
Amahora angu-22 - ubisi lwebele noma 200 ml yenhlanganisela.
Ngehora leshumi - 150 ml of amaqanda, ½ amaqanda, 30-40 ml wezithelo puree, 20-30 ml wejusi
Amahora angu-14 - 20-30 ml yemhluzi yemifino, 150 g of puree zemifino, 35-40 g we inyama puree, 60-70 ml of ijusi
Amahora angu-18 - 150 ml wefir noma ubisi obomuncu, 20-30 g we-cottage shizi, 50-60 ml wezithelo puree
Amahora angu-6 - 45 g yezithelo i-puree, ubisi lwebele noma 200 ml yenhlanganisela
Amahora angu-10 - 150 ml porridge, 20-30 g cottage shizi, 45 ml wejusi yezithelo
Amahora angu-14 - 30 ml isobho semifino emhluzeni wenyama kanye nama-gramu angu-10 wesinkwa esimhlophe, 150 ml we-puree yemifino nama-meatball (60 g), 45 ml wejusi yezithelo
Amahora angu-18 - 150 ml yogurt nge-biscuit noma cracker (10-15 g wezinkwa ezimhlophe), 50 g we-puree yemifino, 45 g yezithelo puree
Manje ngokuqondile ukuthi yikuphi okufakiwe kuqoqo lwemikhiqizo yengane ezinyangeni ezingu-9.
I-Kashi iyindlela elula yokusebenzisa ukukhiqiza ezimbonini okungadingi ukupheka. Kuwo, i-vitamin edingekayo yamavithamini namaminerali isethulwa. Uhlale ukhonza leli phuloho kuphela, ngoba uhlukanisa isabelo esisodwa ngaphambi kokudla. Abakhiqizi kanye nezitshalo eziketshezi ezenziwe ngomumo, ezinamaphakheji ahlangene. Uma ulungiselela iphariji ngokwakho, kungcono ukusebenzisa ufulawa lwezingane ezikhethekile kusuka kokusanhlamvu okuhlukile: okusanhlamvu, i-oatmeal, i-corn, irayisi, imango, njll. Ungakwazi ukupheka ufulawa we-cereal ngokwakho. Ukwenza lokhu, hamba uhlanza ama-groats, owomile nesibindi ku-coffee grinder.
I-Porridge ilungiswe ngamanzi, umhluzi wemifino, ubisi obugcwele noma obuhlanjululwayo, usebenzisa izindlela ezimbili eziyisisekelo.
Esikhathini sokubilisa okuketshezi okuketshezi, kancane kancane uthele ufulawa we-cereal, usawoti, u-sweeten (uma ubhulovu upheka kahle) futhi, ngenkathi ugqugquzela, pheka uze ulungele.
I-groats iphekwe ekulungiseleleni okugcwele, isula ngesihlungo noma emhlabathini endaweni yokuxuba, bese ufaka ubisi olushisayo noma umhluzi wemifino, usawoti, u-sweeten bese ubilisa ngamaminithi angu-2-3.
Engxenyeni yephareji faka ibhotela elincane (5-6 g).
Kuwusizo ukupheka okusanhlamvu kusuka engxenyeni yezolimo ezahlukene, ngaleyo ndlela ukwandisa inani labo lokudla okunomsoco. Kulungile ingane nengqolowa, ehlanganisa okusanhlamvu ngokuhlanganiswa nemifino (izaqathe, amathanga, njll) noma izithelo (apula, eliphakathi kwe, ama-apricot, njll).
Ngezinyanga ezingu-9, umntwana usuvele ehlangene cishe yonke imifino . Manje imenyu yayo ihlanganisa i-zucchini, ithanga, izaqathe, ukholifulawa, i-broccoli, i-turnips, amazambane, utamatisi, ummbila nama-peas aluhlaza, ama-beet. Uma ingane ivame ukubekezelela i-component eyodwa ye-purees, ungahlukanisa ukudla kwayo ngokunikela izitsha ezivela emxineni wemifino. Kufanele kukhunjulwe ukuthi inani lamazambane akufanele libe ngaphezu kwe-1/3 yenani eliphelele lokudla.
Izithelo kanye namajikijolo ahlukahlukene. Ama-apula nama-pears, ama-plums nama-apricot, ubhanana, ama-oranges kanye nama-tangerines, ama-cherries nama-cherry, i-currants, ama-strawberry - uma ingane ingenayo imithi, iyojabula ngokuningi okunjalo. Futhi, yiqiniso, izithelo namajikijolo zithandwa kwamanye amaswidi. Ungakwazi futhi ukulungiselela njengengxenye eyodwa ye-puree, ne-puree kusuka engxenyeni yamajikijolo nezithelo. Lezi zinhlayiya zinganikezwa ngokuhlanganiswa ne-yoghurt ne-curd.
I-Cottage ushizi nemikhiqizo yobisi ngaphambilini kunconywa ukuba kuhanjiswe kusethi yemikhiqizo yengane kakade eneminyaka engu-5-6. Nokho. Eminyakeni yamuva nje, odokotela bezingane bayeluleka ukuba bangasheshi futhi bathule imivimbo kule mikhiqizo kamuva, ezinyangeni ezingu-7-8. Ngezinyanga ezingu-9, ingxenye ye-cottage shizi i-20-30 g ngayinye yokudla, i-kefir - 170-180 ml. Ukudlula lezi zimiso akufanele kube. Unganiki ingane i-cottage shizi, i-yogurts ne-kefir, ithengwe esitolo noma emakethe. Kufanele usebenzise ukudla okhethekile kwezingane noma ulungiselele i-cottage ushizi ne-yogurt ngokwakho.
I-cottage cheese ye-Dietetic ingalungiselelwa ngezindlela eziningi.
I-curd ushizi i-calcined , ekulungiswa ngokusebenzisa isisombululo se-calcium chloride ethengwe ekhemisi. 300 ml ubisi obilisiwe ezitsheni ezinomsoco, epholile bese wengeza kuso 3 ml wezidakamizwa. Ingxube ewumphumela iqhutshwa, ihanjiswe emathunjini, bese ikhohliwe ekamelweni lokushisa. I-cottage cheese ehlanganisiwe iphonswa ngesihlunu esimbozwe nge-gauze ehlanzekile, icindezelwe futhi isakaze ezitsha eziyinyumba. Isitsha silungile!
I-curd esondayo ilungiswa ngesisekelo se-yogurt yengane noma i-kefir nge-1% kokuqukethwe kwamafutha. I-100 ml ye-kefir itholakala ngo-50 g. i-cottage shizi. I-Kefir ithululelwa embizeni, ebeka phansi embizeni yamanzi (ebekade ibeke umqubu we-gauze phansi ukwenzela ukuthi ibhodlela lingaphuli). Khona-ke, ekushiseni okuphansi, amanzi alethwe ngamathumba. Ngemuva kwemizuzu engu-5 yokubilisa, i-cloth ephumela embizeni isakazwa phezu kwe-gauze ehlanzekile, idonse futhi ipholile. I-Cottage ushizi isilungile!
Ukudla kwengane ezinyangeni ezingu-9 kufanele kunikezwe ngenani lika-60-70 gr. ngosuku. Kungaba yenkomo enenkomo encane yezinkomo kanye nenyama yengulube, i-veal kanye ne-rabbit, i-turkey nenkukhu (inyama emhlophe ngaphandle kwesikhumba), iwundlu elilonda.
Ungasebenzisa amathini amancane okwenziwe ngomumo, unganikeza inyama ebilisiwe, kabili udlule i-grinder yenyama, i-souffle, i-meatballs. Izinhlanzi zinikezwa noma ziphekwe (i-fillet), noma ngendlela yokuphefumula nama-meatballs. Kungcono ukuhlanganisa inyama nenhlanzi izitsha nge-purees yemifino. Ama-Meatballs angakhonzwa embhedeni, esobho.
Zonke lezi zincomo zifanele izingane ezingenalo ukuphendula okweqile ekudleni. Uma kwenzeka ingane yakho ingenangqondo, imenyu yakhe iyosiza ukukhetha udokotela.
Amafutha omifino ezinganeni
Izinhlayiya zefulawa we-rye kanye noshizi kanye nosamatisi omiswe ilanga
I-pasta ene-chard, utamatisi noshizi
Izakhiwo eziwusizo zamanzi amaminerali
Ukukhulelwa nokuvuvukala okungapheli kwama-appendages
Izinto ezingu-7, intombazane engadingeki neze
Dye amachashazi amnyama ekhaleni
Izinhlanzi ze-Aquarium, zinakekele
Ubuhlobo phakathi kowesifazane nowesifazane buxabana nomyeni wakhe
Ubumnene buyinkinga noma injabulo yowesifazane wanamuhla?